Isamsung yazisa esweni kuqala ngetekhnoloji ye-QLED, egobile kunye noThunderbolt 3 uqhagamshelo | Iindaba zeGajethi
Ngomhla kaJanuwari 9 kude kube ngumhla we-12, kubhiyozelwa umboniso wetekhnoloji yabathengi obaluleke kakhulu kulo nyaka, umboniso olungileyo, njengakwiminyaka edlulileyo, oza kubanjwa kwakhona eLas Vegas. Kodwa njengesiqhelo, iinkampani ezinkulu sele zisesixekweni, kwaye zithatha ithuba kwiintsuku eziphambi kweCES, ukuya thaca ezinye zeemveliso eziza kufika unyaka wonke.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikwazise ngenkcazo ye-TV yokuqala ye-88-intshi, kunye nesisombululo se-8k kunye netekhnoloji ye-OLED, ukuba ngumvelisi wokuqala kwihlabathi ukumilisela umabonwakude wesisombululo esinjalo, ubungakanani kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji ye-OLED. Ngoku lithuba lembangi yakhe, uSamsung, owayekhe wabeka itekhnoloji ye-OLED ecaleni ukugxila kwi-QLED, izise iliso lokuqala eligobile ngale teknoloji.
Le Samsung CJ971 isinika isisombululo see-intshi ezingama-34, isebenzisa itekhnoloji ye-QLED, igobile kwaye ikwasinika unxibelelwano lweThunderbolt 3, unxibelelwano esinokufikelela kulo amaxabiso okudlulisa ukuya kuthi ga kwi-40 GB ngomzuzwana, amaxesha ama-4 ngaphezulu kwe-USB 3.0 uqhagamshelo. Eli liliso likwabonelela ngamandla angama-85 w, ukuze sikwazi ukuyisebenzisa ngokudibanisa nelaptop yethu sisebenzisa amandla esiwabonayo ukuze sihlale Siza kuba neLaptop egcwaliswe ngokupheleleyo.
Isisombululo esifikelelwa liliso ngu-3.440 x 1.440, kwaye sisinika ithuba lokuhamba nge-4ms, Ilungele abo basebenzisi abafuna ukusebenzisa oku kubek 'esweni ukonwabela imidlalo abayithandayo. Ngokumalunga nexabiso, inkampani yaseKorea isimema ukuba sityelele indlwana yayo e-CES ukufumanisa amaxabiso ayo kunye nomhla ekulindeleke ukuba umiselwe emarikeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Isamsung yazisa esweni kuqala ngetekhnoloji yeQLED, egobile kunye noThunderbolt 3 unxibelelwano
Thatha ithuba lokujongana nekrisimesi ye-Lightinthebox yamva nje ngaphambi kokuba iphele